Thwebula Tango 1.6.14117 – Windows – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Tango
Tango – a isofthiwe sokukhulumisana emhlabeni wonke phakathi kwabasebenzisi. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze amakholi wezwi futhi baxhumane nabangani endaweni mode of videoconference. Tango engikhiphela a search for abasebenzisi by mobile inamba yocingo noma ikheli le-imeyli. Isofthiwe kwenza ukwenza amakholi free kusuka ekhompyutheni kumadivaysi ezahlukene okuyinto asekelwa uhlelo iOS nobe Android. Tango nawo iqukethe amathuluzi amaningana ngazo umsebenzisi has ikhono ukushintsha izilungiselelo ukuze ivumelane izidingo zomuntu ngamunye.
Yenza yezwi namakholi wevidiyo
Cinga abasebenzisi by mobile Inombolo yocingo
Ukwenza amakholi free kuya amafoni nge isimiso iOS kanye Android
Interface Simple futhi enembile
Amazwana ku Tango
Tango software ehlobene
Isofthiwe ukwenza izwi noma amakholi wevidiyo uphinde uthumele imiyalezo. Kukhona contact ukuvumelanisa okuzenzakalelayo zedivayisi umsebenzisi.
Ithuluzi ukuxhumana nabantu emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba bakhulumisane video inkomfa mode futhi ukushintshanisa idatha.
Isofthiwe ethandwa kakhulu ukuxhumana nabangani emhlabeni jikelele. Isofthiwe kuqinisekisa a izinga okusezingeni lonke izwi video zokuxhumana, futhi ukushintshana elula imiyalezo.
Howard E-mail Notifier – isofthiwe esizayo yokwazisa ngama-imeyili angenayo nemiyalezo ekuxhumaneni nomphakathi okuvela kudoti wehlelo.
I-Midori – isiphequluli esisebenziseka kalula esisekela inani elikhulu lamathuluzi wokuhlala ukhululekile kwi-inthanethi.
Umlobi we-Doro PDF – isoftware yokudala nokusebenza ngamafayela e-PDF. Isoftware isekela ukwakhiwa kwamafayili e-PDF kusuka kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza oluqukethe umsebenzi wokuphrinta.
I-TuneFab Spotify Music Converter – isoftware yokususa ukuvikelwa kwe-DRM kumafayili wakho womculo weSpotify angaguqulwa abe amanye amafomethi omsindo futhi alandwe kwikhompyutha ukuze igcinwe endaweni.